कृष्ण ओलीलाई जापानबाट आयो यति ठुलो सहयोग, कति उठिसक्यो अहिलेसम्म? भिडियो हेरेर जान्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > भिडियो > कृष्ण ओलीलाई जापानबाट आयो यति ठुलो सहयोग, कति उठिसक्यो अहिलेसम्म? भिडियो हेरेर जान्नुहाेस्
कृष्ण ओलीलाई जापानबाट आयो यति ठुलो सहयोग, कति उठिसक्यो अहिलेसम्म? भिडियो हेरेर जान्नुहाेस्
admin January 15, 2019 भिडियो, समाज 0
काठमाडौँ। २१ वर्षीय कृष्णको अनुहारमा झट्ट हेर्दा निकै स्वस्थ देखिन्छन्। तर उनीमाथि ठुलो बज्रपात आइलागेको छ। विद्युत प्राविधिक पढेका उनी तुल्सीपुरमा विद्युत विस्तारको काम गर्दै आएका थिए। गत जेठ २५ गते विद्युत लाइने विस्तार गर्ने क्रममा उनलाई ११ हजार भोल्टेज क्षमताको करेन्ट लागेर कृष्णले सधैँका लागि दुवै हात र एउटा खुट्टा गुमाउनु पर्याे।
कृष्ण ओलीको भिडियो जताततै भाइरल भइरहेको बेलामा जापानमा बस्ने युवायुवतीहरुले पनि उनको लागि ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ । उहाहरुले खुला हृदयले यति धेरै सहयोग जुटाउनुभयो कृष्णको उवचारको लागि र यसका साथै आज कृष्ण र उनको परिबार अचानक अस्पतालमायस्तो अवस्थामा फेला परेका छन ।
हेरौ सहयोग रकमसहितको यो भिडियो —
‘भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने हो भने आर्यघाटमा दाहसँस्कार गर्ने ठाउँ पुग्दैन’
नेपाली सेनाको तालिम प्राप्त फौजी कुकुरको यस्तो सशक्त प्रस्तुति, हेर्ने नै दङ्ग! ( भिडियो सहित)